thrusters T600 Sprint FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
thrusters T600 Sprint FS2004
downloads ရယူရန္ 12 030
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကောင်းတဲ့သေးငယ်တဲ့ ULM ပါ! ဒီနည်းနည်း cuckoo နှင့်အတူသင်တို့ပြေးရသောခံစားကြည့်ပါ! အဆိုပါ thrusters T600 Sprint တစ်ဦး Ultra-ပေါ့ပါးတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက် thrusters Air လေကြောင်းလိုင်းန်ဆောင်မှုများ Langworth, Lincolnshire နှင့်အလယ်ပိုင်း 1990s မှာစတင်မိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါယူနစ်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အဆင်သင့်-to-ပျံသန်းလေယာဉ်အဖြစ်ထောက်ပံ့နေသည်။
SZD Bocian စက်မဲ့လေယာဉ် v6 FS2004